Yaa maalgeliya dagaalka Amin Caamir? | allsanaag
Yaa maalgeliya dagaalka Amin Caamir?
Yaa maal geliya Sawirada badan ee uu Amin Caamir ka samaynayo Gaas sida heesaaga caanka ah Faladegan uu u sameeyo heesihiisa
Yaa maal gelinaya dagaalka joogtada ah ee Amin caamir ku hayo madaxweynaha Puntland Cabdi weli Gaas, halka marka ay doorashada Somaliland Socotay uu Muuse Biixi oo xasuuq ka gaystay Waqooyiga Soomaaliya ku sheegay inuu yahay hogaamiye g’oaan qaadasho leh. Ma go’aankii halka maalin Isir nacaybka reer Awdal lagu xasuuqay 1000 qof, ayaa ahaa Go’aan qaadasho. Amin Caamir ayaa ka jawaabi doona.
Su’aasha is waydiinta mudan ayaa waxay tahay Amin Caamir oo sagaalkiisii sawir ee ugu danbeeyey ka sameeyey madaxweynaha Puntland Cabdi weli Gaas, ayaan beel ahaan ka soo jeedin Beesha Daarood ee degta degaanada Puntland, Murashixiinta ordaysa kuma jitaan mid ka soo jeeda Carab Soomaal oo beeshiisu tahay haddii la dhihi lahaa qabiil ayuu ku taageerayaa , isugu ma tegin sida aan taariikhda ku hayno degaanada Puntland, hadana wuxuu dagaal ugu jiraa in Madaxweyne Gaas uuna mar labaad soo laaban , laakiinse markuu ordayey gacan ku dhiigle Muuse Biixi inuu Somaliland madaxweyne ka noqdo, oo horay Soomaali u soo xasuuqay, oo ololaha ku galay inuu Soomaali kala go’ynayo wuxuu Amin Caamir Ku sheegay inuu yahay hogaamiye go’aan qaadasho leh
Yaa maalgelinaya sawirada tirada badan ee Amin Caamir uu ka samaynayo madaxweyne Gaas sida Heesaaga caanka ah ee Soomaaliyeed Faladegan u sameeyo Heesihiisa?.
Fahad yaasiin iyo Villa Soomaaliya ayaa wada olole ay ku doonayaan in madaxweyne Gaas uuna dib ugu soo laaban hogaanka Puntland, iyaga oo laaluush ku bixinayo falkan guracan. Halka masaakiintii Soomaaliyeed ay maalin walba qarax lagu dilayo oo lagu dayacay amaankood meel aan ka fogayn albaabada Villa Soomaaliya
Allah ha u naxariiste Diinle Kabiirow. Wuxuu ku dhintay qaraxii tiyaatarka, isaga oo wada gaadhi gacan uu ugu shaqayn jiray qoyskiisa oo dan yar ah.
Meel aan ka Fogayn oo 1 km u jirta, oo ah Villa Soomaliya iyadana waxa ku sugnaa madaxdii Soomaaliyeed oo ku mashquulsanaa Lacagtii loo diri Amin caamir si umadda Soomaaliyeed loo marin habaabin lahaa .
Sawirada hoose waa agoontii uu ka tegay Diinle Kabiirow ee danyarta ahaa ee qoyskiisa gaadhi gacanka ugu shaqayn jiray iyo Amin caamir oo musuqmaasaqii laga soo diray Villa Soomaaliya uu gaadhay oo sawir marin habaabin ah ka soo sameeyey madaxweynaha Puntland. Nabad iyo Nolol Soomaaliya kama jirto ee musuqmaasaq kii ugu xumaa ayaa ka socda
Ugu danbayntii Xildhibaanada reer Puntland, oo 26 ka mid ah ay ka soo jeedaan gobolada Sool iyo Sanaag oo ninkii xasuuqa u gaystay markuu ahaa hogaamiyaha SNM uu Amin Caamir ku sheegay hogaamiye go’aan qaadasho leh , ayaa lwaxay leeyihiin codka iyo go’aanka lagu dooranayo hogaamiyaha soo socda. Waxba laga waydiin maayo nin aan degaanka u dhalan oo laaluush lagu soo siiyey marin habaabinta reer Puntland. Soomaalinimadana u yaqaan hadba qofkii jeebka wax ugu rida, xitaa hadduu yahay Gacan ku dhiigle xasuuq Soomaaliyeed soo gaystay
← Kalligii ayaa Isxilqaamay Gaadaale oo noqday afhayeen →